Gen. Ntaganda oo loo wareejinayo ICC - BBC Somali - Warar
Gen. Ntaganda oo loo wareejinayo ICC
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 Maarso, 2013, 04:37 GMT 07:37 SGA
General Bosco Ntaganda waxa loo heystaa dambiyo ka dagaal
Dacwad oogtada ugu weyn maxkamadda caalamiga ee Hague, Fatou Bensouda, ayaa sheegtay in ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay inuu dambiyo dagaal ka galay Congo Bosco Ntaganda la geyn doono maxkamadda hague toddobaadkan.
Mr Ntaganda oo hogaamin jiray mucaaradka ka dagaalamayay jamhuuriyada dimuqraadiga ee Kongo ayaa isku soo dhiibay Isniintii safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Kigale ee xarunta dalka Rwanda.
Dhinaca kalena Fatou Bensouda waxa ay sheegtay in maxkamadda ICC ay siiw adi doonto kiiska Madaxweynaha la doortay ee Kenya Uhuru Kenyatta. Laakiin Ms Bensouda waxa ay sheegta in aanay ogeyn xilliga ay maxkamadiisu bilaaban doono.
Mr. Kenyatta waxa loo heystaa dambiyo ka dhan ah bini'aadanimada doorkii uu ku lahaa rasbahadihii dhacay kadib doorashooyinkii dalka Kenya 2007.
Waxa uu beeniyaa in wax dambi ah uu galay. Dacwadiisa waxa ay qorsheyney inay bilaabato bisha soo socota laakiin waxaa dib loogu dhigay July kadib markii qareenadiisu ay codsadeen waqti dheeraad ah.